Gay Bara Games–အွန်လိုင်းအခမဲ့လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများ
လိင်တူချင်း Bara ဂိမ်းများကိုသင် Queer နိုင်မည့်စကြဝuniverseာဖြစ်သည်
သငျသညျဗီရိုထဲကဒါမှမဟုတ်သင်ဆဲကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ yur လိင်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ သငျသညျ bisexual သို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့လိင်စိတ်များစွာသောအခြားနှစ်ဖက်အကြောင်းကိုစပ်စုလျှင်ထိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ သငျသညျအမြားဆုံးလက်တွေ့ကျကျလမ်းအတွက်တောရိုင်း kinks အချို့ကိုခံစားနိုင်မည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ် site ပေါ်တွင်ဂိမ်း၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းရှိသည်။ လိင်တူချင်း Bara ဂိမ်းရုံညစ်ညမ်းဂိမ်းကစား site ကိုထက်ပိုပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဤမျှလောက်များစွာသောစစ်မှန်တဲ့လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာတစ်ဦးကို virtual စကြဝဠာပါပဲ။, ငါတို့သည်သင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုပြတ်ပြတ်သားသားအချက်များမှတဆင့်ဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လက်တွေ့ကျကျအပြန်အလှန်နှင့်အတူအရှုပ်ထွေးဆုံး RPG ဂိမ်းတစ်ခုလိင် simulator ကိုအတွေ့အကြုံအတွက်တဦးတည်းလိင်အရေးယူအပေါ်တဦးတည်းကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်အပူဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းထဲကနေ,သင့်အလိုဆန္ဒများကိုနှစ်သက်ဖို့လိုအပ်အရာအားလုံးရှိသည်။ ဒီ site ပေါ်တွင်တင်ဆက်သောစုဆောင်းခြင်းအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဂိမ်းအသစ်များတွင်ဂရပ်ဖစ်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုဒါသဘာဝကျကျစီးဆင်းနှင့်ပင်အသံအလုပ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။, HTML5 ဂိမ္းသစ္ရဲ႕ စုစည္းမႈအသစ္ဟာၿပီးျပည့္စံုတဲ့ cross platform ရရွိႏိုင္မႈကိုလည္းေပးစြမ္းႏိုင္တာမို႔ ဒီဂိမ္းေတြအားလံုးဟာသင့္ browser မွာတိုက္႐ိုက္၊ေဒါင္းလုဒ္၊extensionေတြကို install လုပ္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။
ဤတွင်ရှိသောစုဆောင်းမှုသည်အခမဲ့သင့်ထံသို့လာသည်။ သင်ကဘာမှလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒေတာပြီးနောက်ရဲ့အခမဲ့ site ကိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျနော်တို့အသွားအလာပြန်ညွှန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်ပေးပို့ဘယ်တော့မှ. ဒါဟာအားလုံးကဒီမှာအခမဲ့ဂိမ်းကစားအကြောင်းကိုဖွင့်,ကျနော်တို့ site ပေါ်တွင်ပြသသောအနည်းငယ်အလံကြော်ငြာတွေကနေကိုယျ့ကိုယျကိုထောကျပံ့. ဤကြော်ငြာများကိုသတိမပြုမိဘဲလွန်သွားလိမ့်မည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ရန်လိုသောကြော်ငြာမျိုးသို့မ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားထဲကသစ္စာစောင့်သိပရိတ်သတ်တွေအောင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ပါပဲ။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်တို့သည်ငါတို့၏site ပေါ်တွင်လာသည့်အခါ,သင်သည်ဤစုဆောင်းမှုအတွက် featured ဖြစ်ကြောင်းဂိမ်း၏သက်သက်အရေအတွက်ကသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဤမျှလောက်များစွာသောဂိမ်းပြီးသား site ပေါ်တွင်နှင့်လာရန်များစွာသောပိုပြီးနှင့်အတူ,ငါတို့သွားရောက်လည်ပတ်သူကိုမဆိုယောက်ျား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သည်ကိုသေချာပါသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဒီစုဆောင်းမှုအတွက်မင်းသမီးအားဖြင့်ပျော်မွေ့ကြသည်ဂိမ်းများကိုရှိသည်။
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရှုနှင့်သင်ဖြည့်ဆည်းချင်ပုံပေါ်မူတည်.,သင်ရိုးရှင်းတဲ့လိင် simulator ကိုကစားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်,ဤမျှလောက်များစွာသော genre မှ RPG ဂိမ်း,ချိန်းတွေ့ simulator ကနေသင် avatars နှင့်ပြီးပြည့်စုံ quest များတက်အဆင့်ရထားတဲ့အတွက်စိတ်ကူးယဉ်သူတွေကိုရန်,သို့မဟုတ်စာသားကို-based ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအစားထဲမှာဇာတ်လမ်းအပေါ်လုံးဝအခြေခံထားတဲ့ခေါင်းစဉ်,သင်အတွင်းကနေပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည် wildest erotica အတွေ့အကြုံများကို.
ဤမျှလောက်များစွာသောယောက်ျားတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဆောင်တတ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်နောက်ထပ်ကြီးမြတ်အမျိုးအစားရုပ်ပြောင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများတွင်သင်သည်သင်၏ကျော်ကြားအရူးအမူးအားလုံး fuck ဆိုတဲ့ရလိမ့်မယ်,ဒါပေမယ့်လည်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကာတွန်း,anime နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲကနေအများအပြားဇာတ်ကောင်။ လိင်တူချစ်သူပုံပြင်များအဖြစ်ကျော်ကြားသော anime နှင့် manga စီးရီးများကိုပြန်လည်ပုံဖော်ထားသည့် hentai ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏site ပေါ်တွင်မိန်းကလေးများနှင့်လူကြိုက်များသောခေါင်းစဉ်များဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့,လွန်ခဲ့သောလအတွင်းအများဆုံးအာရုံကိုရရှိသွားတဲ့အမျိုးအစား furry လိင်တူချစ်သူဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်. ဤဂိမ်းအချို့ကိုသင် fuck ဆိုတဲ့နိုင်ပါတယ် furry သတ္တဝါတွေစိတ်ကြိုက်ရသောလိင် simulator ဖြစ်ကြသည်။, အခြားဂိမ်းများကိုသင်တစ်ဦး fursona avatar နှင့်အတူတက်လာပြီးတော့သင် furry ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မြေပုံသွားလာရင်းနှင့်လည်းသူတို့ရဲ့ puffy ပါးပြင် clapping နေစဉ်သူတို့၏နောက်ခံပုံပြင်များသင်ယူရသည့်အတွက် RPG ဂိမ်းအဖြစ်လာမယ့်နေကြသည်။
အဆိုပါလိင်တူချစ်သူ Bara ဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အကောင်းဆုံးအညွှန်းနှင့် browsing ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဒီမှာအကြီးအအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှရှိသည်သေချာစေတော်မူ၏။ ဂိမ်းများအတွက် tags များနှင့်ဖော်ပြချက်မှတပါး,ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့အခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့် site ပေါ်တွင်အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်း features တွေပါဝင်သည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤအတွေ့အကြုံကိုကျနော်တို့လုံးဝ discrete ဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ငြိမ်းချမ်းစွာခံစားနိုင်ပါသည်။, ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်မမေးပါဘူးမသာ,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းဘယ်သူ့ကိုမှရန်သင့် IP address ကိုပယ်ရှားပေးမည်မဟုတ်သည့်စာဝှက်ထားတဲ့ဆာဗာများကိုပူဇော်,ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှ.